Square Cash ikhulisa Bitcoin Ukuhweba izici bonke abasebenzisi - Blockchain Izindaba
Februwari 1, 2018 admin
Square Cash ikhulisa Bitcoin Ukuhweba izici bonke abasebenzisi
Square sika peer-to-peer lokusebenza lokukhokha ngokuthi Cash Square, okuyinto Bitcoin Ukuhweba lokusebenza, isiyatholakala kubo bonke abasebenzisi (ngaphandle kwalezo eNew York, Georgia, Hawaii, noma Wyoming). Abasebenzisi ayakwazi athenge futhi athengise bitcoin usebenzisa noma inkokhelo baye exhunywe lokusebenza.
Abasebenzisi bangakwazi ukuthenga kuze kube $10,000 engabiza Bitcoin ngesonto kanye idiphozi kusuka kwamanye amakheli.
Bitcoin yomsebenzisi aphethwe Square, elisho bona zibambene ku-akhawunti yakho futhi hhayi kudivayisi. Nakuba lokhu akusho ngaso sonke isikhathi okungcono kakhulu ezokuphepha kungcono nakanjani kangcono umsebenzisi isilinganiso abangakwazi ukhohlwa iphasiwedi yabo noma ulahlekelwa ifoni yabo futhi usazokwazi alulame zemali yabo
Esitatimendeni inikezwe TechCrunch kusho inkampani:
"Imali App amandla abantu ukufinyelela uhlelo lwezimali, kanye namakhasimende ethu baye babonisa isithakazelo elula, indlela ongenekayo athenge futhi athengise Bitcoin. Ngokusebenzisa umshayeli, esizifunde lukhulu mayelana nendlela singenza lokhu nakho kusheshe futhi kube lula futhi siyajabula ukuthi inwebe ukutholakala kwayo. "- Square Okhulumela
Previous Post:UNgqongqoshe wezeziMali Netherlands: Bitcoin kudinga ukuhlolwa ukuvunywa
Next Post:MasterCard sika-CFO: Cryptocurrency ukuthenga ekufukuleni ikhasimende imali yethu
Korea Telecom umemezela blockchain ngezizathu zokuphepha inethiwekhi
Imibhalo Snowden zembula NSA nentshisekelo ethungatha abasebenzisi Bitcoin
I-Russian Central Bank yenza isinqumo sokugcina ku cryptocurrency zokuhweba
US ukuhweba Umlawuli oluqalisa blockchain iqembu ukusebenza
Northern Trust PwC izosebenzisa blockchain ukusheshisa ukubalwa kwezimali
Bacabanga ukuthi uma nje kungenzeka ukuceba ngokushesha ku cryptocurrencies
bitcoin bl block chain btc ifu izimayini Coinbase crypto cryptocurrencies cryptocurrency ethereum exchange hardfork ico litecoin ma miner izimayini network new izindaba protocol ripple balandela telegram token tokens trading isikhwama